Fiantraikan’i Brezila: Olona an’Arivony Mihetsiketsika ‘Ho Amin’i Paragoay Tsara Kokoa’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jolay 2013 17:07 GMT
Olona manodidina ny 3000 eo ho eo [es] no nidina an-dalamben'ny renivohitr'i Paragoay mba handrenesan'ny ao amin'ny antenimiera azy, taorian'ny fironana fihetsiketsehana ao Brezila herinandro vitsivitsy lasa izay.
Notontosaina tamin'ny alalan'ny tambajotra sosialy, tamin'ny alalan'ny teny ifankafantarana #porunparaguaymejor. [“Ho amin'i Paragoay tsaratsara kokoa”] ny fanentanana ny sivily hiomana ho amin'ny zoma 21 jona.
Fitarainana fototra roa no niteraka ny fihetsiketseha-panoherana tany Asunción.
Voalohany, Asehon'ny olom-pirenena amin'ny alalan'ny fihetsiketsehana ny tsy fankasitrahany ny fanolorana volavolan-dalàna ,tamin'ny voalohany, nilaza ny hampidinana ny 15 taona ho 10 taona ny mahaparlemantera azy ireo mba hahazoany retirety karama feno (100%); izay manodidina ny 40 tapitrisa Guarani isam-bolana (eo ho eo amin'ny 8.500 dolara amerikana eo).
Taorian'ny fihetsiketsehana, nilaza ny parlemantera sasantsasany fa volavolan-dalàna natolotry ny mpanao lalàna mety tsy ho tafaverina hahazo ny sezany amin'ny fe-potoana manaraka manomboka ny volana aogositra amin'ity taona ity izy io raha ny tena marina. Araka ny navoakan'ny gazety an-taratasy mivoaka isan'andro Ultima Hora [es], “amin'io fanitsian-dalàna io, mitady tombontsoa manokana amin'ny alalan'ny lalàna [ireo mpikambana parlemantera ireo], fa ireo fanovana ireo dia tsy mila mahatratra 55 taona akory ry zareo dia efa mandray retirety”.
“Handray retirety karama feno (100%) ry zareo afaka 10 taona. Midìna an-dalambe hanamelohana azy.”
Trakitra voalohany niely haingana nanerana ny tambajotra sosialy
“Na ny orana aza tsy hahasakana ny afon'ny fanafintohinanay”
Sary izay nivoaka ao amin'ny pejy mpankasitraka ny Anonymous Paraguay ao amin'ny Facebook.
Ny faharoa indray dia fitarainana mifandraika amin'ny fanemorana [es] ny fanekena trosa amin'ny fametrahana ny metrobus, karazana fitateram-bahoaka vaovao izay nampanantenaina hanatsarana ny tolotra izay efa ambivitra amin'izao fotoana.
“Lasa aiza ny niafaran'ny ambim-bola ho an'ny fitateram-bahoaka? Tsy mila voalavo ambony kodiarana intsony” Saripikan'i Gabriela Galilea
‘Anao ny fitenenana’
Tamin'ny 7 ora harivan'ny zoma 21 Jona, nisy “anao ny fitenenana” (malalaka ny fanamafisam-peo) natsangana teo amin'ny fiodinana eo amin'ny Plaza de Armas [kianja lehibe] Manoloana ny Kongresy Nasionaly, ahafahan'ny olom-pirenena maneho ny tsy fahafaliany sy hivoahan'ny fitarainany.
Tao anatin'ny minitra vitsivitsy monja dia nisy olona 50 eo ho eo nilahatra hilazany ny fitarainany eo anoloan'ny vahoaka izay maro ihany. Ny fitarainana niverimberina indrindra maneho ny tsy fahafalian'ny olona manoloana ny depiote mampakatra ny karamany sy ny tombontsoany ary mieritreritra fa “olona miavaka manokana” ry zareo, araka ny fiampangan'ny olo-pirenena.
Sary nopihan'i Gabriela Galilea
Valian'ny vahoaka hiaka isaky ny kabarin'ny tsirairay. Amin'ity lahatsary manaraka ity isika afa-mihaino ny fomba filazan'ny olo-pirenena iray hoe “Tsy mana-tahotra i Paraguay” nandritra ny fotoana nandraisany ny fitenenana, izay namalian'ny vahoaka tamin'ny fehezanteny tahaka ny “Tsy maintsy mandeha ireo, tsy tokony hisy tavela na iray aza”:
Misy ny fehezanteny mampitehaka sady mampitsangana ny vahoaka manatrika sy miako any amin'ny tambajotra sosialy: “Mahatratra 1.500.000 ny Paragoayana tsy mahalala izay hohaniny rahampitso, ary ny zareo [depiote] kosa mividy fanjaitra volamena sy haka retirety 40 tapitrisa [Guarani] ao anatin'ny 10 taona”, “Nifoha i Paragoay”, “Maro ny tanora no voaroran'ny rafitra”, “nantsoin'ny lalàna hoe hajaina ry zareo (manondro lalàna iray nampidirina manery ny olom-pirenena hanondro ny depiote ho “hajaina”) ary tsy misolotena antsika ireo”, “Inona no mitranga any Curuguaty?” (eo ampahatsiarovana ny fandripahan'olona nahafatesana olona 17 taorian'ny fanafihan'ny polisy tany amin'ny faritra avaratry ny firenena), “Aiza ny Fonacide?” (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo [Tahirimbolam-Pirenena ho amin'ny Fampiasam-Bolam-Panjakana sy ny Fampandrosoana] natsangana tamin'ny 2012 avy amin'ny vola azon'i Paragoay taorian'ny fanitsiana ny vidin'ny angovo nihoatra avy ao amin'ny tohodrano amelomana angovon'aratra ao Itaipú namidy tamin'i Brezila).
Efa endrika tarigetra fifanentanan'ny hetsiky ny olompirenena ao Paragoay ny ‘anao ny fitenenana’, fihetsiketsehana efa nanomboka 2012 tamin'ny anarana “Revolisiona Aorian'ny Ora Fiasana” [es] ka nahomby tamin'ny fampijanonana ny fitomboan'ny tetibola an-tapitrisany maro handraisana mpiasa politika.
Herintaona taorian'ny fitsarana nanaisotra an'i Fernando Lugo teo amin'ny prezidansa, dia nidina an-dalambe nandao ny antokony sy ny ideolojiany indray ny Paragoayana hivondrona ho toy ny olo-pirenena iray “[hamela] marika ny lahavolana parlemantera”, mandritra ny anao ny fitenenana.
Naharitra adiny roa sy tapany ny anao ny fitenenana, mandra-pahatonga ny tamin'ny sivy ora sy sasany alina, raha nisy andian'olona nisafidy ny hanao diabe hizotra mankany amin'ny Panteón de los Héroes [Fasan'ny Maherifo], izay niteraka fifanenjanana sy ny fidirana an-tsehatra nataon'ny polisim-pirenena mitam-piadiana, na dia tsy nisy aza ny fifandonana.
Saripika nopihan'i Gabriela Galilea avy amin'ny finday avo lenta
Niray hina ihany koa ny tanàna Paraguayana hafa ka nidina an-dalambe hampandrenesana ny feon'izy ireo, tahaka ny any Ciudad del Este sy ny any Encarnación, ny tanàna faharoa sy fahatelo lehibe indrindra manaraka ny renivohitra, Asunción.
trakitra manentana ny mpanao fihetsiketsehana any Ciudad del Este, sary nozaraina tamin'ny Facebook tao amin'ny pejy Paraguay Reclama [Fitarainan'i Paragoay]
Ny Fiantraikan'ny tany Brezila
Ny fampanantenana fa hanahaka ny any Brezila ny iray amin'ireo fihetsiketsehana maro, izay nifampiantoana tamin'ny alalan'ny tambajotra an-tserasera, araka ny notenenin'ny olo-pirenena maro rehefa hikatona ny fotoanan'ny anao ny fitenenana.
Tsy niandry ela ny fiantraikan'ny fihetsiketsehana dia tsara, araka ny tatitra nataon'ny ABC Color [es] : “Ny filohan'ny antenimieram-pirenena, Víctor Bogado (ANR [Antoko Colorado]), dia nanome antoka omaly fa hotsipahin'ny ao amin'ny Lapa(ny) ny volavolan-dalàna manova sy mampihena ho 10 taona ny [hahazoan'ny] mpanao lalàna retirety”.
Saingy tsy nanome lanja loatra momba ireny fihetsiektsehana ireny ny gazety tao amin'ny firenena raha oharina amin'ny gazety iraisampirenena, tahaka ny Folha de Sao Paulo [pt] na ny BBC Mundo, [es] izay nitazana ny fihetsiketsehana tamin'ny alalan'ny fitantarana lava sy sary maromaro.
Natsangana ny kaonty @xunpymejor hanome naoty amin'ny olo-pirenena ny hetsika vaovao, hizara sary sy hampahafantatra vaovao hatrany ny mpanao fihetsiketsehana. Nampiasaina ho fitaovam-pifandraisana fototra ho an'ireo fikambanana tarihon'olo-pirenena sy ny mpanao fihetsiketsehana manantena “hanome marika ny fandahara-potoan'ny parlemantera vaovao handray ny asany amin'ny volana aogositra” ny kaonty ary mba ho voavaha tokoa ny olana nitarainan-dry zareo.